Yini okufanele uyazi ngomkhosi we-Oktoberfest eMunich? | Izindaba Zokuhamba
Maria | | Alemania, Ukuphunyuka eYurophu
Izolo kuqale uhlelo olusha lomkhosi odumile waseJalimane emhlabeni: i-Oktoberfest. Lo mbukiso, onhloko yawo enkulu ubhiya, uphinde unikeze nezinye izinto eziningi ezikhangayo kulabo abanquma ukuvakashela eMunich kuze kube ngu-Okthoba 3.
Umagazini wango-2016 kuhlelwe ukuthi ubungaze abantu abayizigidi eziyisikhombisa enkanjini yaseTheresenwiese. uzimisele ukuba nesikhathi esihle phakathi kwama-toast, umculo nokudla okuningi. Uma kulo nyaka ungathanda ukuba ngomunye wabo bese ugcwalisa amanethiwekhi wakho wokuxhumana nomphakathi ngezithombe eziseBavaria ukuze ubukise ngazo kubalandeli bakho, awukwazi ukuphuthelwa yilezi zinto ezi-6 okufanele uzazi nge-Oktoberfest ukukhombisa ulwazi lwakho ngeqembu lekwindla ukuthi wonke umuntu ufuna ukuhamba.
1 Umsuka we-Oktoberfest
2 Ukuhlolwa okwenziwa nguTheresienwiese
3 Ngubani oqala i-Oktoberfest unyaka nonyaka?
4 Ubhiya ka-Oktoberfest nokudla
5 Ipikiniki e-Oktoberfest
6 Ungaya kanjani e-Oktoberfest?
7 Ibhonasi: Ezokuvakasha eMunich
Ubuwazi ukuthi i-Oktoberfest yokuqala yenzeka ngo-1810? Bekubungazwa emcimbini womshado phakathi kukaLouis I waseBavaria noTeresa waseSaxony ngaphansi kwesiqubulo esithi "phuza bonke."
Lo mgubho waba yimpumelelo kangangokuba emakhulwini eminyaka kamuva uyaqhubeka nokugujwa eJalimane futhi usudlulele nakwamanye amazwe. LIndawo yokungena eTheresienwiese esplanade lapho kugujwa khona imahhala futhi lapho lapho ungabamba iqhaza kolunye lwezinkambo eziqondisiwe zendawo lapho bachaza khona ngokuningiliziwe nangezilimi eziningana ukuthi i-Oktoberfest iguquke kanjani ngokuhamba kwesikhathi.
Ukuhlolwa okwenziwa nguTheresienwiese
I-Oktoberfest ingumbukiso omkhulu owenzeka edlelweni elingamahektare angama-46 elibizwa ngokuthi iTheresienwiese, lapho kufakwa khona amadokodo kabhiya eMunich, amasondo e-ferris, amatafula okudla, imincintiswano, njll. Lapha kukhona nesithombe esikhulu esibizwa ngeBavaria (esimele umhlaba) kanye nesonto laseSan Pablo.
Ngubani oqala i-Oktoberfest unyaka nonyaka?
NguMongameli waseBavaria neMeya yaseMunich abaqala iphathi ngemuva kokushaya imivimbo embalwa emgqonyeni wokuvula womcimbi futhi baphuza iziphuzo ezimbalwa ezitsheni ebeziphakelwe.
Ukusuka lapho, imibukiso engapheli yemvunulo yendabuko, imibukiso yokudla, amakhonsathi, izindawo ezikhangayo nezinkundla eziningi zokunambitha ubhiya ziqala amasonto. Ukungena kwe-Oktoberfest kumahhala kepha uma usungaphakathi kwamanani awehli ngaphansi kwama-euro angama-9. Kodwa-ke, kunezephulelo ngamaSonto ngoba usuku lokuvakasha komndeni.
Ubhiya ka-Oktoberfest nokudla
E-Oktoberfest kungaba khona amaphuzu amadokodo anikezelwe kubhiya naku-gastronomy. Eziningi zazo zingezindawo zokuphekela utshwala edolobheni ezifana nePaulaner, Agustiner, Pschörr, Löwenbräu, Hofbräu noma iSchützen phakathi kwabanye. Kodwa-ke, kukhona futhi amadokodo angenalo igama lomkhiqizo kabhiya futhi avakashelwa kakhulu njengoMarlstal, Wildstuben noma uWinderer Fähndl.
Ubhiya ongajatshulelwa eMunich ungaphansi koMthetho Wokuhlanzeka wango-1516, ovumela kuphela ukuthi wenziwe ngamanzi, ibhali, uhobhane nemithombo. Lokhu kufakwa kumajeke kahafu-litre abiza cishe ama-euro ayishumi, okucishe kufane nepuleti lokudla. Into esemqoka ukuhambisana nabo ngamaqhubu amnandi noma amasoseji ukuze uzinikeze okuhle futhi ngasendleleni uthokozele amaqembu omculo wamadokodo, ngoba akuvunyelwe ukukhipha isiphuzo kuwo noma ukuphuza emgwaqweni.
Ezinye izitsha zokudla kwendabuko kwaseBavaria ngama-pretzels amakhulu, i-dampfundel (inhlama egcwele inyama ephekwe iphekiwe), inyama eyosiwe namazambane nesosi yewayini elibomvu, i-weisswurst (amasoseji amhlophe aphekiwe isikhumba sawo esingadliwe), inkukhu eyosiwe, i-fischbraterei (inhlanzi eyosiwe skewered on a stick) noma i-currywurst (amasoseji e-curry athandwa kakhulu eBerlin). Futhi asikwazi ukukhohlwa ushizi noma amakhukhi we-gingerbread ngemilayezo efana nokuthi 'Ngiyakuthanda' ongayinikeza njengezipho.
Ukuvakashela e-Oktoberfest akukwazi ukuphothulwa ngaphandle kokuvakashela izingadi ze-biergärten noma ubhiya eMunichNgamanye amagama, amasimu angaphandle lapho abantu bavame ukubuthana bazungeze isihlahla se-chestnut esihle ukunambitha ubhiya omnandi. Enye yezingadi ezinconywe kakhulu ukuthi zibonwe yilezo zeMarket Square, enezitokisi zamasoseji angango-maxi, ushizi, inyama yezinyamazane noma izithelo ezingavamile.
Ungaya kanjani e-Oktoberfest?
Kusukela endizeni, iMunich inesikhumulo sezindiza esikhulu kakhulu futhi sixhumeke kahle enkabeni. Ukusuka lapho ungathatha ulayini kamasipala we-U4 noma u-U5 (Theresenwiese) ukufika endaweni lapho umcimbi uqhubeka khona. Uma sikhetha imoto, kunendawo yokupaka eduzane ne-Oktoberfest kodwa kufanele kubhekwe ukuthi, uma unikezwa ukungena komphakathi, kuzoba nzima kakhulu ukupaka. Ikakhulukazi ngezimpelasonto.
Ibhonasi: Ezokuvakasha eMunich
Uma usalulama ku-hangover ukuthi i-Oktoberfest izokushiya futhi ufuna ukusebenzisa kakhulu ukuhlala kwakho eMunich, sincoma ukuvakashelwa kwamasiko edolobheni. Sizoqala ngesikwele esihlaba umxhwele saseMarienplarz (indawo yezombusazwe, ezenhlalo nezamasiko kuleli dolobha), sizoqhubeka sidlule eHholo LaseDolobha elidala kanye nasethempelini elikhulu lamaGothic ngendlu eluhlaza ekhazimulayo, iFrauenkirche, eyakha uphawu lwaseMunich. Uma uduka phakathi nohambo, iya eFuente del Pez njengoba kuyindawo yomhlangano oyintandokazi yabantu baseMunich.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » Alemania » Yini okufanele uyazi ngomkhosi we-Oktoberfest eMunich?
Amadolobha ama-5 angahle angabi khona ku-2100
Yini okufanele uyibone futhi uyazi eBarcelona, ​​idolobha laseBarcelona